Cité Universitaire Ambohipo: Tonga nitsidika ireo mpianatra i Lanto RAKOTOMANGA
Nanantanteraka fitsidihana ireo mpianatra monina eny amin’ny CUR Ambohipo ny kandida ho solombavambahoaka Lanto RAKOTOMANGA izay ao anatin'ny faritry ny boriboritany faha II iny toerana iny.
Ontsa tateraka izy nahita ny trano ipetrahan’ireto mpianatra ireto, tsy vitan'ny efa kely ny efitrano, nefa mbola mahatratra hatramin’ny fito no miaramonina ao. Simba avokoa ireo fotodrafitrasa eny an-toerana ary tsy mendrika ny mpianatry ny anjery manontolo hoy izy ny mipetraka amin’ireto trano tsy manaraka ny fenitra tokony ho izy ireto.
Nanana ny maha izy azy tokoa raha ny cite universitaire tamin’ny androny ary tokony ho modely eraky ny afrika sy izao tontolo izao izany mpianatry ny anjery manontolo izany.
“Ontsa ny foko mahita anareo monina amin’ity toerana ity, tsy amin’ny maha mpanao politika ahy, fa amin’ny maha reny sy zoky ahy no nahatongavako eto androany, ho jerena manokana ny momba anareo sy ny fiainanareo ety, sady tanora ny filohantsika tsy hamela tanora toa anareo hionona amin’izao, inareo no ho avin’ny firenena” hoy i Lanto RAKOTOMANGA.
Tsy tonga nitsidika ihany anefa izy, fa nanantontosa fanadiovana faobe teny an-toerana sy fandrarahana fanafody miaro sy mamono bibikely. Teo koa ny fandiovana sy fitsidihana ny toerana izay hasiana “Internet gratuit” ho an’ireo mpianatra, araky ny efa nampanantenainy. Koa efa nisy ny teknisianina nalefa nijery ny fanantanterahana izany teny an-toerana, koa tsy ho ela dia hipetraka izany “internet gratuit” izany.
Nisy koa ny fifaninanana baolina baskety lahy sy vavy, izay tanterahin’ny mpianatra eny an-toerana, koa nanolotra akanjo fanaovam-baolina sy baolina baskety ny tenany. Havaozintsika hoy izy ity kianja filalaovana baolina baskety ity ary hasiantsika toerana fialokalofana na “air de repos” eo akaikiny.